Uyazi ntoni nge-SEO kwiziko elitsha?
Nazi ezinye iingcebiso malunga ne-SEO efanelekileyo kwiisayithi zeendaba, njengoko amaphepha ewebhu anjalo afuna i-traffic enkulu ngakumbi. Yonke into ingaba yinto elula, njengokuba luncedo loPhando lweeNjini zoKhenketho zonke iiwebhusayithi zeendaba ziyakwenza isicelo salolu hlobo lwenkokhelo lokuheha abafundi abatsha kunye nokubenza babe ngabaphulaphuli abanwebafundi abamileyo. Ngale ndlela, ucebise ukuba uthumele umxholo omtsha kunye nokuhlaziywa kutshanje. imibhalo umbhalo wakho kufuneka ulwazi kwaye usoloko yodwa, loo nto kufuphi zonke SEO for sites iindaba idinga ngokuxhaphakileyo. Kodwa zama ukungafaki isicelo sobugcisa obumnyama, kunye nokuthintela iitekisi zakho ukuba zigqitywe ngamagama angundoqo, qhagamshela ugaxekile, umxholo ophindiweyo kunye njalo.
Ngezantsi kunamacandelo amancedo amaninzi, ukusuka kwimbono ye-SEO yeendawo zendaba - hotel sales malaga. Uninzi lwazo lwavanywa kwaye lusetyenziswa-xa ndandinamava aqeshwe kwiwebhusayithi yephephandaba:
Faka isicelo sokuphucula umxholo, njengoko i-injini yokukhangela i-algorithms iyayiqonda into esemgangathweni yezinga eliphezulu kwi-SERPs. Ngoko, umxholo wakho ucebile, ugcwele, uhambelana, kwaye uhlala unomxholo omtsha, uxhaswa ngeentloko ezinkulu ezichaza yonke into esemgangathweni yephepha kwiwebhu. Zive ukhululekile ukufaka amagama angundoqo okanye amagama athile kumbhalo womzimba, kunye nombhalo wesikhala somfanekiso ngokunjalo. Ngaloo ndlela, qaphela, nangona kunjalo, ukugcina ubume begama eliphambili ngaphakathi kweepesenti ezi-2 zeencwadi zombhalo. Ukufumana ulwazi olungaphezulu, unokuhlala ukhangeleka ngezikhokelo ezisemthethweni ngeGoogle
Ukwenza i-SEO kwiziko leendaba, kufuneka uqaphele ngakumbi ukulungiswa kwe-URL xa udala zonke iipapasho okanye ukuthumela. Soloko uhlolisisa kabini ukubeka amagama angundoqo amagama okanye ii-keyprrases kuzo zonke i-URL oyidalayo, ngelixa ukuhlaziywa kwezinto ezikhoyo kungathi kube yinto efanelekileyo-incedo kubafundi bakho, kwaye ikulungele ukukhwela ngamarobhothi okucinga ngexesha elinye. Kwakhona, ngokuqwalasela i-SEO yeendawo zeendaba, uyacetyiswa ukuba ungene kwi-URL nganye ngeenombolo ezikhethekileyo ngaphezu kwamadijitri amathathu ubude bayo.
Nantsi apha iphela nje yeyona migaqo yesikhokelo se-meta ye-SEO yeendawo zeendaba, ngoko ulungele ukuqwalasela oku kulandelayo xa uyifaka:
Okokuqala, i-meta tag njenge news_keywords iya kunceda bobabini umshicileli (ukuvumela ukucacisa nokukwahlukanisa ubuninzi beenkcukacha), kunye nabafundi abaye benzayo (ukwenza lula ukuphequlula okanye ukuxelela ulwazi, umzekelo , ngeendlela zokunxibelelana kwezentlalo)
Khumbula, kuphela iimpawu zokugqibela ezivunyelwe kwii-URL kunye neemeta tags ziinkomas. Zisebenzise kuphela ukuhlula amagama angundoqo kunye namagama abalulekileyo.
Uninzi lwamagama aphambili apha luyakwazi ukuthwala ixabiso elifanayo, ndithetha xa ndibhekisela kwi-SEO kwiindawo zeendaba
Phakathi kwezinye izinto ezinoncedo apha nolu khetho ukusebenzisa 10 amagama angundoqo njengamagama, e. g. , ukwenza itekisi entsha kwinqaku yakho esanda kupapashwa. Ukwenza njalo, uya kuhlala uhlolisisa i-double check-check: ukuba kwenzeka ukuba ibakala elilodwa libonakalisa lingenanto engayibalulekanga kulo mbandela, abasebenzisi banokukukhawuleza balitsho ngokukhawuleza ukulungisa.